Arakaraka ny maha antitra ny fiara no mihabe ny fandaniana solika? -News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Moa ve ny fahanteran'ny fiara dia mihabe ny fandaniana solika?
Olona maro no hiatrika olana toy izany. Arakaraky ny itondrany fiara no mahalana ny mahazatra azy ireo. Na izany aza, rehefa mihabe ny taonan'ny fiara dia mihombo hatrany hatrany ny fanjifana solika ao anaty fiara. Raha ny marina dia tsy fahasimban'ny fiara io. Satria ny faritra sasany amin'ny fiaranao dia mila tazonina na soloina. Tsy misy fifandraisana tsy azo ihodivirana eo amin'ny androm-piainan'ny fiara sy ny fanjifana solika.
Ny fiakaran'ny fanjifana solika amin'ny ankapobeny dia mifandray akaiky amin'ny lafin-javatra 6:
1. Jereo matetika ny tsindry kodiarana sy ny fanaovana kodiarana
Raha ambany loatra ny tsindry kodiarana dia hitombo ny fifandirana eo amin'ny kodiarana sy ny tany, hitombo ny fanoherana ary hitombo ny fanjifana solika. Rehefa mitondra fiara ianao, raha toa ka mihena ny halaviran'ny fiarakaretsaky ny fiara dia tokony hojerenao raha mifanaraka amin'ny fenitry ny tsindry ny rivotra ny faneren'ny rivotra. Ny tsindry kodiarana mahazatra dia manodidina ny 2.5bar, ary azo ahena 0.1 bar amin'ny fahavaratra. Aza adino koa ny manamarina ny ambaratongam-bolo amin'ny kodiarana. Raha tonta mafy ny kodiarana dia matetika solafaka, ary hitombo koa ny solika. Amin'ny ankapobeny, isaky ny 50,000 kilometatra dia tsy maintsy manova kodiarana vaovao ianao.
2. Tandremo ny menaka, diovy ny tahirin-tsolika
Betsaka ny tompona fiara tsy miraharaha ny vokatra menaka. Ny lasantsy tsy manara-penitra dia hampitombo ny fametrahana karbonina. Ny fametrahana karbôna be loatra dia hahatonga ny rindrin'ny fantsom-pandrefesana ho henjana, hisy ny fiatraikany amin'ny vokatry ny fihinanana sy ny kalitaon'ny gazy mifangaro, ary hiakatra be ny fanjifana solika. Noho izany dia tsy azo odian-tsy hita ny kalitaon'ny lasantsy, ary ilaina ny manadio ny tahiry karbonika isaky ny enim-bolana.
Previous: Inona no olana hitranga raha tsy ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ny fiara?
Next: Famantarana 7 alohan'ny fiara simba